कम्प्युटराइज्ड संख्यात्मक नियन्त्रण (सीएनसी) को परिचय हुनु अघि निर्माण प्रक्रियामा कठोर मानवीय श्रम, अनावश्यक रूपमा लामो समय उत्पादन, सामग्रीको अपव्यय, र त्रुटिले भरिएको थियो। आज, प्रविधिले उत्पादन प्रक्रियामा ठूलो सुधार गरेको छ।
सीएनसी मशीनिंग टेक्नोलोजीको परिचयले उच्च स्तरको विश्वसनीयता प्रदान गर्दछ, पुनरावृति प्रक्रियाहरू अधिक स्वचालित बनाउँदछ। तर, सीएनसी मेशिन के हो? कुन उत्पादनहरू सीएनसी टेक्नोलोजीबाट बनाउन सकिन्छ? कसरी CNC मशीनिंग काम गर्दछ, र कुन सामग्री प्रयोग गर्न को निर्माण प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिन्छCNC मेशिनहरू?
यो लेख CNC मशीनिंग के हो मा गहिरो गोता हो, र प्रक्रियामा शामिल आधारभूत अवधारणाहरू। हामी परम्परागत विनिर्माण भन्दा सीएनसी निर्माणका फाइदाहरू, र सीएनसीको आधुनिक विनिर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेछौं।
हामी सीएनसी सफ्टवेयरमा पनि हेर्नेछौं। अन्तमा, हामी CNC machinists बन्नको लागि प्रशिक्षण दिन चाहने व्यक्तिहरूको के आवश्यक छ भन्ने कुरा हाइलाइट गर्दछौं, र CNC मशीनिंगको विश्वमा भविष्यका प्रवृत्तिहरू छलफल गर्दछौं।
संक्षिप्त CNC को अर्थ होकम्प्युटर संख्यात्मक नियन्त्रण। सीएनसी मशीनिंग एक घटाउ प्रक्रिया हो जुन कम्प्युटरकृत नियन्त्रणहरू मार्फत वर्कपीसबाट कस्टम-आकार डिजाइनहरू समावेश गर्दछ। प्रक्रिया subtractive कि उत्पादन एक उत्पादन बनाउनको लागि सामग्री थप्नुको सट्टा एक प्रारम्भिक टुक्रा बन्द सामग्री चिपिंग द्वारा निर्मित छ।
सीएनसी मशीनिंगलाई रोबोटले गरेको मैन्युफ्याक्चरिंग प्रक्रियाको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। प्रक्रियाले उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सम्भव बनाएको छ किनकी मेशिन स्वत: चल्न सक्छ अपरेटरको निरन्तर उपस्थितिमा रहन बिना।
CNC मशीनिंगको इतिहास के हो?
सीएनसीको पूर्ववर्ती संख्यात्मक नियन्त्रण (एनसी), एक प्रक्रिया होविनिर्माण ईन्जिनियर्स को समाज द्वारा वर्णन"दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात र युगको आगमनको रूपमा चिन्हित गर्दै जुन मेशिन र औद्योगिक प्रक्रियाहरूको नियन्त्रणलाई गलत विज्ञानको मस्यौदाबाट सटीक विज्ञानमा पुर्‍याइनेछ।"
CNC मशीनिंग पन्च टेप-आधारित टेक्नोलोजीको रूपमा सुरू भयो१ 40 s० र १ 50 s० को दशक१ 60 s० को दशकमा एनालग र डिजिटल प्रविधिमा द्रुत रूपमा विकसित हुनु अघि।
जोन टी पार्सनहरूCNC मशीनिंगको बुबा मानिन्छ। उनले संख्यात्मक नियन्त्रणको विकास गरे जुन सिद्धान्त हो कि सीएनसी मसिनि built निर्मित छ। तर पनि पार्सन अघि,मशीनिंग टेकनिक आविष्कार गरिएको थियो१ ,5१ मा। त्यसपछि, १ 195 2२ मा, रिचार्ड केगले म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) को सहयोगमा पहिलो सीएनसी मिलिंग मेशीनको विकास गरे।
सीएनसी मशीनिंगको आधारभूत अवधारणाहरू के हुन्?
सीएनसीले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नको लागि हामीले केही आधारभूत अवधारणाहरू बुझ्नु आवश्यक छ।
यसले मेशिन उपकरणहरूको स्वत: नियन्त्रणलाई जनाउँदछ। यी मेशिन उपकरणहरू दायराबाटमिलिंगवेल्डर, grinders, वाटरजेट कटर, रहाइड्रोलिक प्रेस मेशिन।
डेस्कटप सीएनसी मशीनिंग
यी सीएनसीको न्यूनतम संस्करण हो र मोम, फोम, र प्लास्टिक जस्ता नरम सामग्रीहरूमा काम गर्नका लागि राम्रोसँग अनुकूलन गरियो। यस प्रकारको मसिनिंगले साना उत्पादनहरू बनाउन सीएनसी मेशिनको साना संस्करणहरू प्रयोग गर्दछ, प्राय जसो शौकहरूले।
कम्प्युटर-एडेड मशीनिंग वा म्यानुफ्याक्चरिंग (सीएएम) सीएनसी मेशिनहरू चलाउनका लागि कोड सिर्जना गर्न सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ। क्याम प्रणालीको साथ काम गर्न तपाईलाई तीनवटा चीज चाहिन्छ:
पहिलो सफ्टवेयर हो जुन मेशिनलाई निर्देशनहरूको सन्दर्भमा निर्देशन दिन्छ जुन यो सर्नुपर्दछ।
तपाईंलाई पनि मेशिन आवश्यक छ जुन निर्देशनहरू लिन सक्षम छ।
अन्तमा, तपाईसँग एउटा पोस्ट-प्रसंस्करण क्षमता हुनु पर्दछ निर्देशनहरूलाई भाषामा परिवर्तन गर्न जुन मेसिनहरूले बुझ्न सक्दछन्।
यो आधारभूत, अझै अद्वितीय कम्प्युटर भाषा सीएनसी मेशीनको लागि छिटो NC कोड बुझ्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो (सामान्यतया G-Code भनिन्छ)। यो भाषा हो जुन प्रोग्रामरले मेसिनलाई केहि कसरी बनाउने भनेर बताउन प्रयोग गर्दछ।
एक पोस्ट प्रोसेसर एक अनुवादक हो जसले एक सीएनसी मेशीनको लागि लेखिएको जी-कोडलाई कोडमा रूपान्तरण गर्दछ जुन अर्को सीएनसी मेशिनले बुझिन र कार्यान्वयन गर्न सक्दछ।
कसरी सीएनसी मशीनिंग काम गर्दछ?
सीएनसी मेशिनहरू तिनीहरूको निर्देशनहरू सफ्टवेयरमा प्रोग्राम गरिएको एउटा सानो किबोर्डमा मेशिनमा जडित सफ्टवेयरमा प्रोग्राम गरेर सञ्चालन गर्दछ। सीएनसी प्रणालीले त्यसपछि यी प्रोग्राम गरिएको कार्यहरू रोबोटसँग समान फेसनमा गर्दछ।
सीएनसी मेशिनका बिभिन्न प्रकार के हुन्?
बिभिन्न सीएनसी मेशिनहरु विभिन्न उद्देश्यहरु लाई प्रदान गर्दछ। सीएनसी मेशिनहरूको केहि सामान्य प्रकारहरू मिलहरू, खराद, राउटर, प्लाज्मा कटर, र लेजरजेटर कटर हुन्। तपाईं CNC मेशिनहरूको बिभिन्न प्रकारहरूको र उनीहरूले के गर्छन् उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुन्छयहाँ।
CNC मेशिनले के बनाउन सक्छ?
सीएनसी मेशिनहरूले धातु, प्लास्टिक, फोम र काठ सहित सामग्रीको विस्तृत श्रृंखलाबाट विविध प्रकारका उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्दछन्। जब सम्म कुनै सामग्री काट्न सकिन्छ, यो एक सीएनसी मेशीनमा उत्पादन उत्पादनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। CNCधातु खरादराउन्ड रडहरू, थ्रेडहरू र बाहिरी घेरामा मसिiningको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सीएनसी मिलिंग मेशिनहरू सतहहरू, कीवेज, र अन्य अनियमित आकारहरू प्रशोधन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। ड्रिलिंग मेशिनले प्वालहरू लिन सक्छ:यहाँ।
CNC सफ्टवेयर अनुप्रयोग प्याकेज हो जसले G-Code लेख्छन् जुन CNC मेशिनले पढ्न सक्छ। यो सफ्टवेयर भनिन्छकम्प्यूटर-सहायता प्राप्त उत्पादन (सीएएम)वाकम्प्यूटर-सहायता डिजाइन (CAD)। यो सफ्टवेयर CNC मेशिनको संख्यात्मक नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार छ। यसले सीएनसी मेसिनमा कम्प्युटर प्रोग्रामले व्याख्या गर्न सक्ने डिजाइनहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
सीएनसी सफ्टवेयर को बिभिन्न प्रकारहरु का विशिष्ट उपयोगहरु छन्:
कम्प्युटर-एडेड ड्राइंग (CAD):यो २ डी र थ्रीडी डिजाइनहरू र टेक्निकल कागजात सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त उत्पादन (सीएएम):प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै कामहरू जस्तै वर्कफ्लो, उपकरण पथहरू, र काट्ने सिमुलेशनहरू पूरा गर्न शाखामा काम सेट अप गर्न अनुमति दिन्छ।
कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त ईन्जिनियरिंग (CAE):प्रोग्रामहरू पूर्व प्रक्रिया, विश्लेषण, र पोस्ट-प्रसंस्करण चरणहरूको बखत विकास प्रक्रिया भर प्रयोग गरिन्छ।
सीएनसी मसि ?को फाइदा र बेफाइदा के हुन्?
कुनै पनि अन्य टेक्नोलोजी जस्तै, सीएनसी मशीनिंग विशिष्ट पेशेवर र विपक्षसँग आउँदछ। हामी ती मध्ये केही तल हेर्छौं।
सीएनसी मेशीनको फाइदाहरू
सीएनसी मेशिनले परम्परागत निर्माणको तुलनामा महत्वपूर्ण लागत फाइदा राख्दछ किनकि यसले श्रम लागत घटाउँछ। यो उत्पादन मा त्रुटि को मार्जिन एकदम कम गर्दछ। यसबाहेक, यसले सामूहिक उत्पादनलाई धेरै सजिलो काम बनाउँदछ जुन यो पहिले कहिल्यै नभएको लगातार युनिट आउटपुट पुर्‍याउने क्षमताको कारण भएको छ।
CNC ले डिजाइनमा लचिलोपन पनि प्रदान गर्दछ जसले सफ्टवेयरलाई द्रुत रूपमा पुन: प्रोग्राम गर्न पूर्ण नयाँ भागहरू सिर्जना गर्न वा गल्तीहरू सुधार गर्न अनुमति दिन्छ।
सीएनसी मेशिनको बेफाइदा
सीएनसी मशीनिंगको नकारात्मक पक्ष भनेको प्रारम्भिक सेट-अप लागत हो। कम्पनीहरूले सीएनसी टेक्नोलोजी किन्नको लागि loansण लिन पनि आवश्यक पर्न सक्छ। तर, यदि कम्पनीले सीएनसी मेशिनको माध्यमबाट नाफा बढाउन सक्दछ, त्यो लगानी छिटो पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सीएनसी मशीनिंगले कम्प्युटरहरूको अयोग्यताको धारणाबाट टाढा रहन्छ। यसको मतलव सीएनसी मेशिन प्रणाली प्रयोग गर्ने केहि व्यक्तिले त्रुटिहरूको सम्भावनालाई वेवास्ता गर्न सक्छन्, गल्तीहरूको ध्यान नलगाईकन पर्ची गर्न सजिलो बनाउँदै। यद्यपि उचित प्रशिक्षणको साथ यो कम गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, किनभने यो एक subtक्रियात्मक प्रक्रिया हो, CNC मेशिनले फोहोर उत्पन्न गर्दछ, जसले वातावरणमा केही प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि, फोहर व्यवस्थापन प्रक्रियालाई यस्तै ठाउँमा राख्न सकिन्छ कि सीएनसी मेशिनहरूमा निर्माणको माध्यमबाट उत्पादित फोहोर पुन: साइकल गर्न सकिन्छ।
आधुनिक म्यान्युफ्याक्चरिंगमा सीएनसी मेशीन कसरी महत्वपूर्ण छ?
सीएनसी मेशिनले यसको अधिक क्षमता र सटीकताको प्रस्तावको माध्यमबाट आधुनिक निर्माणको एक नयाँ रूपको शुरुआत गर्‍यो, जसले आधुनिक विनिर्माणको पारम्परिक विधिहरूमा उल्लेखनीय सुधार ल्यायो। यसको मतलव सीएनसी मेशिन प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले श्रम र समयको सर्तमा लागतमा बचत गर्दछ, लामो अवधिमा नाफा बढाउँदै।
सीएनसीले पनि बनावट (धातुको वेल्डिंग पानाहरू, कपालका, पंचिंग प्वालहरू, र ज्वाला काट्ने) जस्ता प्रक्रियाहरू सुरक्षित बनाएको छ। यो कपडाका लागि एक आदर्श विकल्प हो किनभने मेशिनहरू लचिलो छन् र पुन: प्रोग्राम गर्न सकिन्छ।
के सीएनसी थ्रीडी प्रिन्टि Than भन्दा राम्रो छ?
थ्रीडी प्रिन्टि and र सीएनसी मशीनिंग दुबै निर्माण विधिहरू हुन्। तिनीहरू बीच महत्वपूर्ण भिन्नता सीएनसी मशीनिंग एक subtractive प्रक्रिया हो, जबकि3डी प्रिन्टिंग एक योजक प्रक्रिया हो। यसको मतलब यो हो कि पूर्वले एक मूल टुक्राबाट सामग्री चिप गरेर उत्पादनहरू सिर्जना गर्दछ, जबकि पछिल्लोले सामग्री थपेर उत्पाद सिर्जना गर्दछ।
कुन दुई विधि बीच राम्रो छ? यो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै सामग्रीहरू प्रयोग भइरहेको, पार्टहरूको जटिलता, कर्मचारीहरूको सीप, के सिर्जना भइरहेको छ, र वित्तीय विचारहरू। यसैले, एक विधि विशेष कार्यको लागि उत्कृष्ट हुन सक्छ र अर्कोमा होइन।
एक CNC Machinist बन्ने
सम्भावित CNC machinists पेशेमा प्रवेश गर्न प्रशिक्षण र शिक्षाको केही स्तर आवश्यक छ।
तपाईं सीएनसी मशिनिस्ट बन्न कस्तो कौशल चाहिन्छ?
CNC machinistsकम्तिमा हाईस्कूल डिप्लोमा आवश्यक छवा सामान्य शैक्षिक विकास (GED) उनीहरू टेक्निकल स्कूलहरूबाट सीएनसी-विशिष्ट सीप प्राप्त गर्न सक्नु अघि। GED परीक्षणहरूको एक सेट हो कि संयुक्त राज्य वा क्यानाडामा एक व्यक्ति उच्च स्कूल-स्तर शैक्षिक कौशल छ कि छैन निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न।
सीएनसी मशिनिस्टहरू, जोसँग संस्थानहरूबाट प्रमाणपत्र छमेटलर्किंग कौशलका लागि राष्ट्रिय संस्थान(NIMS), प्रमाणीकरण बिना तीमाथि एक फाइदा लिनुहोस्।
म सीएनसी मेशीनिस्ट हुन प्रशिक्षण कहाँ पाउन सक्छु?
मानिस जो प्रोग्रामहरू लेख्छन् जुन CNC मेसिनहरू पछ्याउँदछन् भनेर चिनिन्छCNC प्रोग्रामरहरू, जो पसल फ्लोरमा मेशिनको दौडमा भाग लिनेहरूका रूपमा चिनिन्छन्सीएनसी अपरेटरहरू।
यदि तपाईं सीएनसी प्रोग्रामर हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सामान्यतया धेरै सिकारुको रूपमा वा औपचारिक तृतीयक संस्थामा धेरै समय खर्च गर्नुहुन्छ। सीएनसी अपरेटरहरू सामान्यतया छोटो अवधिका पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्छन्, र उनीहरूको धेरैजसो अनुभव काममा पाउँछन्।
धेरै स्कूलहरु प्रस्तावसीएनसी-विशिष्ट प्रशिक्षण। ती मध्ये एक होगुडविन विश्वविद्यालय, एक संस्था जसले आफैलाई "सीएनसी अपरेटर स्कूल" को रूपमा वर्णन गर्दछ जुन "लचिलो तालिकामा, विद्यार्थीहरूलाई छोटो अवधिमा प्रमाणित गर्न र क्षेत्रमा काम गर्न डिजाइन गरिएको हो।"
के सीएनसी मेशिन मेरो परियोजनाको लागि सही छ?
सीएनसी मशीनिंग बहुमुखी छ, र यसको प्रयोगले धेरै उद्योगहरूमा फराकिलो छ, जसमा एयरोस्पेस, कृषि, निर्माण, प्रिन्टि manufacturing, निर्माण, सेना, र यातायात समावेश छ। यसैले, यदि तपाइँको परियोजना लाई एक ठूलो रकमको स्थिरता, सटीकता, र दक्षता चाहिन्छ भने, CNC तपाईको सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
CNC मशीनिंगको भविष्य कस्तो छ?
जस्तो टेक्नोलोजीहरूकृत्रिम बुद्धिमत्तारमेशिन शिक्षाअधिक लोकप्रिय बन्न, यो पनि सीएनसी मेशिनको लोकप्रियता वृद्धि हुनेछ भन्ने आशा गरिन्छ। यद्यपि केहि चिन्तित हुनसक्दछ कि यी परिष्कृत मेसिनहरूले मानिसबाट काम लिन्छन्, प्रविधिको सुधार हुँदा प्रायः यस्तो अवस्था हुँदैन किनकि तिनीहरूले नयाँ क्षेत्रमा अधिक रोजगारी सिर्जना गर्दछन्।
सीएनसी मेशिनको प्रयोगको प्रसारको दुबै कर्मचारी र निर्माताहरूका लागि लाभ हुनेछ। पहिलेका लागि, प्रक्रियाहरू त्यति गाह्रो हुँदैनन्, र सुरक्षा वृद्धि गरिएको छ। पछिल्लोका लागि, नाफा दक्षताको कारण बढ्नेछ। अर्कोतर्फ, ग्राहकहरूले अधिक गुणस्तरीय उत्पादनहरूबाट लाभ उठाउनेछन्।